Gbasara Anyị | Vishi (Zhejiang) Fluid Technology Co., Ltd.
Ntọala na 1970s na South Korea, YSC bụ onye na-emepụta ihe na ngwaahịa nke ngwaahịa pneumatic nwere nnukwu olu na ngalaba nke ụlọ ọrụ akpaaka. Na 2000, YSC (China) were Qingdao dị ka isi ụlọ ọrụ ya wee mepụta mkpochapu ọkụ, njikwa, ihe nhazi na akụkụ inyeaka, nke a na-ejikarị eme ihe karịa 200 ụlọ ọrụ mmepụta ihe na akpaaka dịka ụgbọ ala, eletrọniki, ngwa eletriki, nkwakọ ngwaahịa, igwe, metallurgy, njikwa ọnụọgụ, wdg, na-enye azịza pneumatic ziri ezi na ezi uche karịa ndị ahịa 100,000.
Mgbe ọtụtụ afọ nke mgbalị, YSC (China) apụtawo na njikọ ndị dị mkpa nke njikwa nduzi na mkpo ọkụ ọkụ na sistemụ ikuku. N'otu oge ahụ, na uru nke mkpuchi ngwaahịa zuru oke na ahịa na ngwa ahịa nke ihe karịrị mpaghara iri na obodo ndị dị na China, YSC (China) na-enye ndị ahịa ọrụ ọrụ ngwa ngwa.
Dịka onye so na China 2025, YSC (China) ga-arụsi ọrụ ike, nọgidesie ike na ihe ọhụụ, buru n'uche ebumnuche ya, gaa n'ihu, gaa n'ihu na-agbaso ụkpụrụ nke ịchụpụghị na uru dị ala ma ghara imejọ na manulife, ma tinye onwe ya na mmepe nke igwe na akpaaka na China.
Kpọọ anyị: 0086-13646182641
Iji mezuo ihe ị chọrọ, egbula oge ịkpọtụrụ anyị.